Ama-Bar Cottages Amane - I-Apache - I-Airbnb
Ama-Bar Cottages Amane - I-Apache
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Bill
Indlu encane etholakala phansi kwezintaba zaseChiricahua, ipharadesi lesazi semvelo. Ilungele abagibeli bezinyoni, izazi zezinkanyezi, abagibeli bamabhayisikili basezintabeni noma izazi-mlando, ezitholakala epulazini lomlando lezinkomo eliphethwe umndeni. Qaphela ukuthi phakathi nezinyanga zethu "zenkathi ephezulu" ka-April noMeyi, kune-TWO NIGHT MINIMUM STAY ephoqelelwa ngokuqinile.
Ikotishi le-Apache eliwubukhazikhazi linamakamelo amabili, elinezindawo zokulala ezinombhede olingana nendlovukazi ekamelweni elilodwa nemibhede emibili kwelinye, ehlalisa abantu abane. Leli kotishi liphinde libe nekhishi, elinesitofu, isiqandisi esincane, ihhavini le-microwave kanye nosinki. Ezinye izici ze-Apache Cottage zifaka umpheme ozungezayo enyakatho nasentshonalanga yendlwana, i-patio yangasese ngemuva, kanye nenqwaba yabantu abaphakela izinyoni phambi kwamafasitela namaveranda. Isiqandisi esinosayizi ojwayelekile, esisegcekeni phakathi kwamakotishi amabili, siyatholakala ukuze sisetshenziswe izivakashi zethu.
Ezinye izici zifaka:
Ithelevishini yesathelayithi yesikrini esiyisicaba
Isistimu yomsindo werediyo ye-AM/FM CD
I-barbecue grill (zilethe awakho amalahle noketshezi olulula)
I-Chimenea (izinkuni zokubasa zinikeziwe)
Itholakala kumahektha angama-80 wendawo yangasese eduze nezintaba zaseChiricahua, Cave Creek Canyon kanye neHlathi Lesizwe laseCoronado.
Abanikazi/abaphathi bahlala eduze, endaweni.